Nzụlite na Akụkọ ihe mere eme
Mpaghara Mkpa, Nha na ndidi
Safetykpụrụ nchekwa maka ịrụ ọrụ ntuziaka
AFPMG maka Obere Ifufe Turbines & Hydro Power
Anyị na-emepụta usoro nke ike ọhụrụ dị oke arụmọrụ, nke nwere diski, nke dị n'ime (nke dị na mpụga), ụzọ atọ, Axial Flux Permanent Magnet Generator (AFPMG) nwere stator. site na ikuku na-ebugharị obere ikuku ikuku (SWT) na ndị na-emepụta Hydro Power. Ihe eji arụ ọrụ nke AFPMG dị mfe, na echiche ntụgharị ihu na usoro stator na-enye generator ezigbo arụmọrụ na arụmọrụ dị elu.
Atụmatụ bara uru
Akwa arụmọrụ na obere ọsọ
Ọ dịghị ihe ọkwọ ụgbọala na-efu, ọ dịghị ihe nkwụfu ọla kọpa na-efu n'ihi ndọta na-adịgide adịgide na enweghị stator eddy ugbu a na ironless (coreless) stator
Ọrụ nke AFPMG, dabere na ihe nlereanya ahụ, ruru 90%.
Obere akụkụ na ibu ibu
AFPMG dị iche iche dị oke mkpa na kọmpat, iwu dị mfe. Ndị na-enye ọkụ na-eji obere igwe rụọ ụlọ ha, ebe ha na-adịgide adịgide ma nwee ogologo ndụ.
Obere ibu na ihe igwe na-enye ọkụ na-eme ka o kwe omume belata nha na ọnụahịa nke igwe ikuku niile.
Ikike dị elu dị elu (ikike mmepụta ihe n'otu nkeji) na-egosipụta nke ọma ndị sitere na ndị na-asọmpi. Nke a pụtara na nwere nha nha na ibu ibu.
Obere mmezi mmezi
AFPMG bụ draịvụ kwụ ọtọ, enweghị gearbox, sistemụ mmanụ, ikuku ịrị elu
Ike ikuku kachasị elu na obere ọsọ na ụlọ ọrụ ahụ pụtara na ndị na-enye ọkụ nwere ike ịkwado ụdị ikuku ikuku ọ bụla na oke ikuku ikuku.
Ojiji nke ikuku ikuku na-ebelata mmezi mmezi yana na-ewusi nnwere onwe nke ike ike ike.
Dị ala na-amalite torque
Obere mkpọtụ, obere mkpọtụ, enweghị eriri igwe, gia ma ọ bụ lubrication unit, ndụ ogologo
Mma na gburugburu ebe obibi
100% teknụzụ dị ọcha na gburugburu ya na ihe eji arụ ọrụ n'oge ogologo ndụ ya yana ịmegharị n'ọdịnihu ga-emerụ ahụ maka gburugburu ebe obibi.
· Main Ngwa
· Obere ifufe generators (SWT)
Ndị na-eji ọkụ eletrik ma ọ bụ mmanụ dizel na-arụ ọrụ,
· Igwe eletriki ụgbọ ala eletrik, dị ka moto na generator.
· Ike Mmiri
· Ngwa nke AFPMG na-enye ihe ngwọta ọzọ na ngalaba nke ndị na-enye ọkụ eletrik ma ọ bụ igwe eletriki n'ozuzu ha. Ngwunye ha dị ka diski na njirimara electromechanical dị mma na-anọchite anya isi atụmatụ na mmepụta ọkụ eletrik ọzọ yana sistemụ eletriki eletrik dị elu.
Ebe ọrụ Igwe Igwe Igwe Igwe Na-adịgide Adịgide (PMG)
Nrụpụta ihe na teknụzụ na-eme Igwe Ọdụdọ Na-adịgide Adịgide (PMG) bụ nhọrọ zuru oke maka ngwa ikuku ikuku ifufe (SWT).
PMG nke na-arụ ọrụ na-ekpuchi mkpa nke obere ikuku ikuku (SWT). Maka igwe ikuku 1-5KW, nwere ike iji otu rotor-single stator nke AFPMG, maka 5KW-50KW turbines, nwere ike iji AFPMG na-ewu otu rotor-abụọ stators.
Ike akara n'elu 50KW na-ekpuchi Radial Flux Permanent magnet Generator (RFPMG).
QM-AFPMG Ne Rotor QM-AFPMG elu Rotor
model gosiri mmepụta ike (KW) gosiri ọsọ (RPM) gosiri mmepụta voltaji Arọ (N'arọ) model gosiri mmepụta ike (KW) gosiri ọsọ (RPM) gosiri mmepụta voltaji Arọ (N'arọ)
1. Akụkụ na nnabata
2. Mmepụta ike, voltaji na RPM
3. Mkpuchi mkpuchi nyocha
4. Malite torque
5. Mmepụta waya (Red, ọcha, nwa, green / ụwa)
1. Ọnọdụ ọrụ: n'okpuru elu nke 2,500 mita, -30 Celsius C ka + 50 Celsius C
2. Tupu echichi, jiri nwayọ na-atụgharị osisi ma ọ bụ ụlọ iji kwenye mgbanwe ntụgharị, enweghị ụda na-adịghị mma.
3. Mpempe akwụkwọ AFPMG bụ ụzọ atọ, nrụpụta waya atọ, tupu echichi ya, jiri 500MΩ Megger ka
lelee mkpuchi mkpuchi n'etiti eriri mmepụta na ikpe, ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 5 MΩ
4. Ọ bụrụ na AFPMG dị n'ime rotor generator, na ntinye usoro, kwesịrị ịgba mbọ hụ na mkpọchi mkpọchi dị, ọ dị ezigbo mkpa
Akwụkwọ ikike: 2-5 afọ
Tinye: No.277 Yinpen South Road, Changsha, PR China
Onye njikwa ịre ahịa: [email protected]
Detuo ikike © 1996-2020 Qiangsheng Magnets Co., Ltd Ikike niile echekwabara